ति पिता संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी, जो सँग छोरी साथमा हुन्छिन् ! यस्तो छ कारण ? — SuchanaKendra.Com
ति पिता संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी, जो सँग छोरी साथमा हुन्छिन् ! यस्तो छ कारण ?
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरीलाई हेलाको नजरले हेर्ने गरिन्छ। तर छोरीले आमा ,बुबाको जीवनमा खुशी भर्नुका साथै बुबाको उमेर केही वर्ष बढाउँने गर्छिन । पोल्याण्डको जागिलोनियन युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनमा छोरीहरुका बुवाहरू छोरी नभएकाहरू भन्दा बढी बाँच्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । उक्त अध्ययनले छोरीभएको घरमा उसको बुबाको उमेर ७४ हप्ता बढ्ने गरेको बताइएको छ । त्यसैले छोरी हुने बुबाको लामो आयु हुन्छ।